Gog bɛtow ahyɛ Israel so (1-16)
Yehowa abufuw bɛba Gog so (17-23)
‘Aman no behu sɛ mene Yehowa’ (23)
38 Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Onipa ba, fa w’ani si Gog a ofi Magog asaase so no so,+ Mesek ne Tubal obirɛmpɔn kunini no,+ na hyɛ nkɔm tia no.+ 3 Ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Mesek ne Tubal obirɛmpɔn kunini Gog, hwɛ, me ne wo wɔ asɛm. 4 Mɛma w’adwene asesa, na mede akɔtɔkoro ahyehyɛ w’afono mu+ de atwe wo ne w’asraafodɔm,+ apɔnkɔ ne ɛsotefo a wɔhyehyɛ ntaade fɛfɛ, w’asafodɔm a wokurakura akyɛm akɛse ne nketewa* ne asekan nyinaa. 5 Persia, Etiopia, ne Put+ a wɔn nyinaa wɔ akyɛm nketewa ne nnade kyɛw no ka wɔn ho; 6 Gomer ne n’asraafodɔm nyinaa, Togarma fi+ a wofi atifi fam akyirikyiri ne n’asraafodɔm nyinaa; aman pii nso ka wo ho.+ 7 “‘“Siesie wo ho na yɛ krado, wo ne wo dɔm nyinaa, wɔn a wɔaboaboa wɔn ano wɔ wo nkyɛn nyinaa, na wo na wubedi wɔn anim.* 8 “‘“Nna pii akyi no mɛba abɛhwɛ wo. Na mfe a edi akyiri mu no, wobɛtow ahyɛ wɔn a wɔagye wɔn afi sekan ano no asaase so, wɔne nnipa a wɔboaboaa wɔn ano fii aman pii so baa Israel mmepɔw so no; efi bere tenten na ayɛ amamfo. Asaase yi sofo na woyii wɔn fii aman so bae, na wɔn nyinaa te hɔ dwoodwoo.+ 9 Wobɛba wɔn so sɛ ahum, na wobɛkata asaase no so te sɛ omununkum; wo ne w’asraafodɔm nyinaa ne aman pii a wɔka wo ho.”’ 10 “Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni, ‘Saa da no, biribi bɛba wo komam na woadwen adwemmɔne. 11 Na wobɛka sɛ: “Mɛtow ahyɛ asaase a ɛho da hɔ no so.*+ Mɛba wɔn a wɔte hɔ dwoodwoo na biribiara nhaw wɔn no so. Wɔn nyinaa tete hɔ a wonni ɔfasu, na adaban ne apon mpo wonni bi.” 12 W’adwene ne sɛ wubenya nneɛma pii afom, na woatow ahyɛ amamfo a afei nnipa tete so no so,+ ne nnipa a wɔasan aboaboa wɔn ano afi amanaman mu+ a wɔanya ahode ne agyapade pii+ no so; nnipa a wɔte asaase mfinimfini no. 13 “‘Saba+ ne Dedan+ ne Tarsis aguadifo+ ne n’akofo* nyinaa bebisa wo sɛ: “Nneɛma pii a wubenya afom nti na worebɛtow ahyɛ wɔn so yi? Woaboaboa w’asafo ano, sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛsoa dwetɛ ne sika kɔkɔɔ na woafa ahode ne agyapade, na wasesaw nneɛma pii akɔ?”’ 14 “Enti onipa ba, hyɛ nkɔm na ka kyerɛ Gog sɛ, ‘Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Da a me man Israel bɛtena ase dwoodwoo no, worenhu anaa?+ 15 Wubefi wo tenabea a ɛwɔ atifi fam akyirikyiri aba,+ wo ne aman pii a wɔn nyinaa tete apɔnkɔ so, asafodɔm kɛse, asraafodɔm bebree.+ 16 Wobɛba me man Israel so te sɛ omununkum abɛkata asaase no so. Awiei nna no mu no, mede wo bɛba ma woatow ahyɛ m’asaase so,+ na sɛ menam wo so tew me din ho wɔ amanaman no anim a, wɔahu me, O Gog.”’+ 17 “Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni, ‘Ɛnyɛ wo na menam me nkoa adiyifo a wɔwɔ Israel so kaa wo ho asɛm tete no? Wɔhyɛɛ* nkɔm mfe pii sɛ mede wo bɛba ma woatow ahyɛ wɔn so.’ 18 “Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni, ‘Saa da no, ɛda a Gog bɛtow ahyɛ Israel asaase so no, m’abufuw bɛdɛw.+ 19 M’anibere ne m’abufuw mu na mɛkasa; saa da no, asaasewosow kɛse bɛba Israel asaase so. 20 Me nti, ɛpo mu mpataa, wim nnomaa, wuram mmoa, mmoa a wɔwea fam nyinaa, ne asaase so nnipa nyinaa ho bɛpopo, na mmepɔw bedwiriw agu,+ na abotan akɛse apaapae na afasu nyinaa adwiriw agu fam.’ 21 “‘Mɛma sekan aba no so wɔ me mmepɔw nyinaa so. Na obiara bɛtwe sekan wɔ ne nua so,’+ Awurade Tumfo Yehowa asɛm ni. 22 ‘Na mede nsanyare a edi awu+ ne mogyahwiegu bɛtwe n’aso; na mɛma osu kɛse ne asukɔtweaa+ ne ogya+ ne sɔfe*+ atɔ agu ɔne n’asraafodɔm ne aman bebree a wɔka ne ho no so.+ 23 Na mɛhyɛ me ho anuonyam na matew me din ho, na mɛda me ho adi wɔ aman pii anim ma wɔahu sɛ mene Yehowa.’
^ Nt., “wobɛyɛ wɔn hwɛfo.”
^ Anaa “nkuraa-nkuraa a enni ɔfasu no so.”
^ Anaa “n’agyatanini a wɔn ho yɛ den.”
^ Anaa “Adiyifo no hyɛɛ.”